हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ?
काठमाडौं, दुबईमा सवारी दुर्घटनामा एक नेपाली युवाको निधन भएको छ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका-३ खुज्नाबारी घर भएका कैलाश बिश्वकर्माको गत फेब्रुअरी ४ तारिखमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएको हो । कम्पनीको कामबाट फर्कैदै गर्दा सवारी दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो । १८ दिन पहिले निधन भएका बिश्वकर्माको श’ व आज साँझ १० बजे नेपाल आइपुग्ने पारिवारिक श्रोतले हाम्रोसंचारलाई बताएको छ । मृ’त क कैलाश बिश्वकर्माको श’ व श्रीमती मनु सापकोटाले सँगै लिएर आउदैछन् ।